Simulators 5 kacha mma maka gam akporo | Androidsis
Ọ bụrụ na ị na-achọ egwuregwu simulator maka gam akporo nwa oge, ị bịarutela akụkọ ziri ezi. N'isiokwu a, anyị ga-egosi gị ndị bụ, n'echiche anyị, ndị Egwuregwu ịme anwansị 5 kacha mma maka gam akporo dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play.
Aha ndị a niile nwere ọkwa dị elu karịa kpakpando anọ, ha dị maka gị budata n'efu ma gụnye ịzụrụ n'ime ngwa. Tụkwasị na nke ahụ, ụfọdụ n'ime ha na-enye anyị mgbasa ozi.
1 Ultimate Car Driula Simulator
2 Clublọ ịgba ụgbọala
3 Ezigbo vinggbọala Sim
4 Simgbọ ala Simulator 2
5 Oke Car Driving Simulator
Ultimate Car Driula Simulator
Egwuregwu Ultimate Car Driving Simulator na-ejikọta eziokwu na physics ịnya ụgbọ ala n'otu akụkụ iji mepụta otu n'ime simulator ịnya ụgbọ ala kacha mma dị na Storelọ Ahịa Play.
Aha a na-eme ka anyị si na ya na-agba ụgbọ ala n'ụgbọ ala ndị na-adịghị n'okporo ụzọ nke ọ bụla nwere physics mmegharị ya kwekọrọ, nke ga-enye anyị ohere ịnụ ụtọ ụdị ịnya ụgbọ ala dị iche iche ọ bụghị naanị dabere na ọsọ nke ụdị ọ bụla ruru.
Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere mepụta ụgbọ nke anyị, Ọ na-ewere ọnọdụ n'ime ụwa mepere emepe ebe anyị ga-arụ ọrụ iji nweta ụgwọ ọrụ, ụda nke ụgbọ ala dị adị, ọ gụnyere injin ihe osise 3D ...
Ultimate Car Driving Simulator simulator ịnya ụgbọ ala nwere a Nkezi ọkwa nke kpakpando 4 n'ime 5 ga-ekwe omume N'ihe karịrị nyocha 550.000, aha anyị nwere ike ibudata kpamkpam n'efu yana gụnyere ịzụrụ na mgbasa ozi.
Simulator ịnya ụgbọ ala kacha, chọrọ ma ọ dịkarịa ala Android 5.0 ma na-ewe ihe karịrị 160 MB.
Developer: Ụlọ Studio
Clublọ ịgba ụgbọala
Na ekwentị gị ọ bụghị ọgbọ ikpeazụ ọ pụtaghị na ị gaghị enwe ike ịnụ ụtọ ụdị aha a. Drive Club, egwuregwu na-adịghị ewu ewu dị ka aha ndị ọzọ anyị na-ekwu maka ya n'isiokwu a, nke emebere ya maka ngwaọrụ nwere njirimara siri ike ma nwee ọkwa dị mma.
Drive Club bụ egwuregwu simulator ịnya ụgbọ ala nke ahụ nwere naanị ihe karịrị 100 MB na N'agbanyeghị obere nha ya, ọ na-enye anyị eserese 3D yana arụmọrụ na-enye afọ ojuju na njedebe ochie.
Emebere katalọgụ ụgbọ ala dị na aha a karịa ugbo ala iri ise, si SUVs ka okomoko egwuregwu ụgbọ ala site electric ụgbọ ala, SUVs, ịba uru ugbo ala ... nke anyị nwere ike na-eje ije site a na-emeghe ụwa aha.
Daalụ maka ego anyị na-enweta na-eme ozi ma ọ bụ ịzụ ahịa na ụlọ ahịa, anyị nwere ike hazie ụgbọ ala anyị. Drive Club na-enye anyị ụdị egwuregwu ndị a:
Ọnọdụ ntanetị. Anyị na ndị egwuregwu ndị ọzọ nwere ike igwu egwu.
Acrobatic mode. Anyị ga-agarịrị n'okporo ụzọ egwu nwere rampụ iji mee stunts wee bụrụ onye mbụ ga-eru ebumnuche.
Ụdị ịnya ụgbọ ala efu. Maka ndị ọrụ chọrọ naanị simulator ịnya ụgbọ ala enweghị nkọwa.
Ụdị nkwụsịtụ. Ebe anyị ga-emebirịrị ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke ihe na gburugburu ebe obibi anyị n'otu oge.
Ụdị ebe a na-adọba ụgbọala. Ezubere ka anyị na-eme ka anyị na-adọba ụgbọala anyị.
Lee Point. Usoro a na-amanye anyị ịgafe usoro njikwa oge tupu oge ụfọdụ.
Drive Club nwere nkezi ọkwa nke 4,3 kpakpando n'ime 5 enwere ike, ọ dị maka gị budata n'efu, gụnyere ịzụrụ ihe, chọrọ gam akporo 5.0 ma ọ bụ karịa ma were 139 MB.
Ọ bụrụ na ị dị njikere emefu ego, Nke a bụ otu n'ime egwuregwu ebe ịzụrụ n'ime egwuregwu dị ọnụ ala ma e jiri ya tụnyere aha ndị ọzọ anyị na-egosi gị n'isiokwu a.
Club mbanye: Auto Spiele, Spiel
Developer: Mepee Egwuregwu ụgbọ ala ụwa
Ezigbo vinggbọala Sim
Real ịnya ụgbọ ala Sim bụ aha nwere Ọkwa kacha na Play Store n'ụdị nke simulators ịkwọ ụgbọ ala nwere kpakpando 4,6 n'ime 5 enwere ike yana ọkwa karịrị 150.000.
Site na Sim Real Driving Sim, anyị nwere ike ịgagharị ihe karịrị obodo 20 kesara na ụwa mepere emepe, gụnyere ọnọdụ multiplayer, online mode, ụgbọ ala na-enye akwụkwọ ntuziaka na akpaka nnyefe, ihu igwe na-agbanwe ...
Ezigbo ịnya ụgbọ ala Sim dị maka gị budata n'efu, gụnyere ịzụrụ ihe na mgbasa ozi ma na-achọ Android 5.0 ma ọ bụ karịa.
Simgbọ ala Simulator 2
Car Simulator 2 na-etinye n'aka anyị karịa ụgbọ ala 55 dị iche icheSite na ụgbọ ala egwuregwu okomoko ruo SUVs. Ọ na-enye anyị ohere igwu egwu n'ịntanetị iji nweta ego site na ịmecha ọrụ, ego na-enye anyị ohere imezi ụgbọ ala anyị na wiil ọhụrụ, taya, gbanwee agba, tinye ngwa ...
Dị ka GTA V, Car Simulator 2 na-ewere ọnọdụ na ụwa mepere emepe ịgagharị n'obodo ahụ n'efu, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ naanị simulator ịnya ụgbọ ala na-enweghị mkpa ịme ọrụ iji nweta ụgwọ ọrụ.
Aha a na-enye anyị ohere ịkwọ ụgbọala na nke mbụ ma ọ bụ nke atọ, gụnyere ezigbo mmetụta na physics, ihu igwe dịgasị n'etiti ehihie na abalị na physics ije bụ nnọọ ezi uche.
Anyị na-agba ọsọ n'ihe ize ndụ ahụ ndị uwe ojii kwụsị anyị, ọ bụrụ na anyị emebi iwu okporo ụzọ, ọ bụ ezie na anyị nwere ike inye ya ihe iri ngo iji zere ịbụ ndị a tara ahụhụ ma ọ bụ ọbụna ịnara anyị ụgbọala. Anyị nwekwara ike nwetakwu ego na-arụ ọrụ maka mafia ma ọ bụ dị ka onye na-anya tagzi.
Car Simulator 2 nwere ọkwa karịrị 700.000, otu Nkezi ọkwa nke kpakpando 4,3 n'ime 5 ga-ekwe omume, dị maka nbudata n'efu, gụnyere ịzụrụ n'ime egwuregwu, yana achọrọ gam akporo 4.4 ma ọ bụ karịa.
Oke Car Driving Simulator
Simulator ịnya ụgbọ ala bụ otu n'ime egwuregwu ịme anwansị ịnya ụgbọ ala kacha mma Ụgbọ ala ndị dị oké ọnụ ahịa nke anyị nwere ike iji na-agba ọsọ ọsọ na-agbanarị ndị uwe ojii ka ha zere ijide ụgbọ ala anyị.
Ọ na-agụnye physics ezi uche dị na ya, physics nke na-emetụta ma mmegharị ahụ na mmebi nke ụgbọ ala anyị nwere ike igosi tupu ihe ọ bụla. Ọ na-enyekwara anyị ohere gbanyụọ usoro nchekwa ụgbọ ala (ABS, ESP, TC…) iji nwalee nka ịkwọ ụgbọ ala anyị.
Emepụtara aha a na a emeghe ụwa nke ga-eme ka anyị nwee obi ụtọ ịnya ụgbọ ala na-ejedebeghị onwe anyị na ịgbagharị egwu egwu, na ịgba ọsọ na-akwadoghị bụ otu n'ime ike. Ị nwere echiche dị iche iche iji jikwaa ụgbọ ala.
Simulator ịkwọ ụgbọ ala dị oke egwu nwere ọkwa karịrị nde anọ na Play Store yana a Nkezi ọkwa nke kpakpando 4,3 n'ime 5 ga-ekwe omume, otu n'ime simulators ịkwọ ụgbọala kacha mma dị na gam akporo kemgbe 2014.
Aha a dị maka nbudata n'efu, gụnyere ịzụrụ in-app yana chọrọ gam akporo 4.4 ma ọ bụ karịa ma gafere 100 nde nke nbudata, ihe doro anya na-egosi na anyị na-eche ihu simulator ịnya ụgbọ ala dị egwu.
Developer: AxesInMotion ije
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Simulators 5 kacha mma maka gam akporo
Otu esi mara ma WhatsApp m na-eji aghụghọ ndị a na-enyocha m